အဲတော့ ဘာဖြစ်လဲ။ ရာသီသွေးပေါ်ခြင်းကို ဂုဏ်ယူလိုက်ပါ။ So What!? | MyStyle Myanmar
မြန်မာ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် အမျိုးသမီးများ၏ ဓမ္မတာရာသီသွေး အကြောင်းကို လူအများကြား မပြောအပ်သော ကိစ္စတစ်ရပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ချက်များရှိနေရာ အမျိုးသမီးငယ်များနှင့် အသက်အရွယ်ရပြီး အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် သတင်းအချက်အလက်များ၊ ကူညီဖေးမှုမှုများ၊ ကောင်းမွန်သော ဓမ္မတာ ရာသီသွေးဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ ရရှိနိုင်ရေးအတွက် အဟန့်အတားများ ရှိနေပါတယ်။ ပန်းကလေးမှ ပြုလုပ်သည့် ပထမဦးဆုံး ကမ်ပိန်းဖြစ်သော So What!? ဟာဆိုရင် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ရာသီသွေးပေါ်သော အချိန်အတွင်း အန္တရာယ်ကင်းစွာနှင့် ယုံကြည်မှုရှိစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ရေးအတွက် အားပေးကူညီသွားခြင်းအားဖြင့် ဤအစဉ်အလာကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရာသီသွေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပွင့်လင်းစွာ စတင်ပြောဆိုလာကြစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အသိပညာပေး ဗီဒီယိုများစွာကို တင်ဆက်ပေးသွားမည့် ဤ So What!? ကမ်ပိန်းတွင် နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်များ၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းများက ပူးပေါင်း ပါဝင် ကူညီထားခြင်းဖြစ်ကာ၊ ယခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ဤကမ်ပိန်းကို မိတ်ဆက်လိုက်ရခြင်းပါ။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အမျိုးသားငယ်များနှင့် အမျိုးသမီးငယ်အများစုမှာ ငယ်စဉ်ကတည်းကပင် ရာသီသွေးသည် ညစ်ညမ်း၍ ရှက်ရွံ့စရာကောင်းသောအရာဟူ၍ သင်ကြားခြင်းခံခဲ့ရသည်။ လူအများယုံကြည်ထားကြသော “ရာသီသွေးသည် ညစ်ညမ်းသည်” ဟူသော အယူအဆသည် အမျိုးသမီးများအဖို့ မိမိကိုယ်ကို တန်းဖိုးထားမှုနှင့် ယုံကြည်မှုကို ထိခိုက် စေကာ၊ အကျိုးဆက်အားဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ ပညာရေးဆိုင်ရာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု၊ ဘဝတိုးတက်မှု အလားလာ ကောင်းများအတွက် ကြိုးပမ်းမှု၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကို ထောက်ပံ့ကူညီပေးနိုင်မှုတို့အပေါ် ရိုက်ခတ်မှုများရှိလာပါတယ်။ ထို့အပြင် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ဓမ္မတာရာသီသွေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့် ပြောပြ ဆွေးနွေးခွင့် မရရှိပါက မှန်ကန်သော သတင်းအချက်အလက်များရရှိရေး၊ ကူညီဖေးမမှုများ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အသုံး အဆောင်ပစ္စည်းများအသုံးပြုနိုင်ရေးတို့အတွက် ပိုမိုခက်ခဲလာမည်ဖြစ်ကာ ၎င်းတို့၏ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုးရွားသော ထိခိုက်မှုများ ရှိလာမှာပါ။
မြန်မာအမျိုးသမီးထု လေးပုံတစ်ပုံခန့်သည် ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်သောရောဂါကို အချိန်အခါမရွေးခံစားနေကြရကာ၊ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်း၏ အကြောင်းအရင်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာ ၎င်းတို့သည် ဓမ္မတာရာသီသွေးပေါ်သောအချိန်တွင် အန္တရာယ် ကင်းစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ရေးအတွက် ဗဟုသုတမရှိခြင်း၊ အကူအညီ အထောက်အပံ့မရှိခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မည့် ဗီဒီယိုများတွင် ကျော်ကြားသော အနုပညာရှင်များ၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ သာမန် ပြည်သူများက ဓမ္မတာရာသီသွေးဆိုင်ရာ မေးခွန်းများကို ကြိုတင်တိုင်ပင်ထားခြင်းမရှိဘဲ မေးမြန်းဆွေးနွေးကြမည် ဖြစ်သည်။ ဤဗီဒီယိုများကို တင်ဆက်ရခြင်းအားဖြင့် ရာသီသွေးနှင့် ပတ်သတ်၍ ဆွေးနွေးပြောဆိုခြင်းသည် သာမန်ကိစ္စ တစ်ရပ်ဖြစ်သည်ဆိုသည်ကို ပြသရန် ရည်ရွယ်သလို၊ အပြုသဘောဆောင်သည့် သတင်းစကားများ၊ အရေးကြီးသော သတင်းအချက်အလက်များကို အများနားလည်လွယ်သောနည်းများဖြင့် မျှဝေပေးခြင်းတို့ကို စတင်ပြုလုပ်သွားနိုင်ရန်လည်း ရည်ရွယ်ပါတယ်။
“ဓမ္မတာလာခြင်းဆိုတာ သဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုဆိုတာကို ကျွန်မတို့ အသိပညာပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဓမ္မတာသွေးပေါ်တယ် ဆိုတာဟာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်စွမ်း၊ ကလေးကို ကာကွယ်ပေးနိုင်စွမ်းရဲ့ ပြယုဂ်တစ်ခု ဖြစ်တာကြောင့် သိပ်ကို လှပတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ သဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သလို ကျွန်မတို့အားလုံးက ဂုဏ်ယူရမယ့်၊ အမျိုးသားတွေအနေနဲ့လည်း စာနာမှုနဲ့ဖေးမပေးရမယ့် မိန်းမဖြစ်တည်မှုရဲ့သဘာဝတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပန်းကလေးကို တည်ထောင်သူ Henriette Ceyrac က ဆိုပါတယ်။
ယနေ့ တင်ဆက်ပေးမည့် ဗီဒီယိုများတွင် ပါဝင်ပေးထားကြသော အနုပညာရှင်များဖြစ်သည့် သန္တာလှိုင်၊ အေးမြတ်သူ၊ စောခူဆဲ၊ ဖွေးနုမိုး၊ ယွန်းနီကို၊ ယွန်းယွန်း၊ ဟေဇယ်လ်ညီညီထွန်း၊ ဖြိုးသံသာချိုတို့နှင့်အတူ ဒေါက်တာဖြိုးသီဟတို့က ရာသီသွေးပေါ်ခြင်းဆိုသည်မှာ သဘာဝပင်ဖြစ်ကြောင်းကို အသိပညာပေးဆောင်ရွက်မည့် ဤကမ်ပိန်းတွင် စိတ်ရော လူပါနှစ်၍ ပါဝင်ကူညီအားဖြည့်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
“ကျွန်မတို့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရာသီသွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး လျှို့ဝှက်ထားရတာတွေ အရမ်းများတယ်။ ကျွန်မဆို ရာသီလာ တာကို မီနီပြနေတယ်ဆိုပြီး သုံးဖြစ်တာများတယ်။ အဲဒါကိုက ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရင် ကျွန်မတို့ရဲ့ ပြည်သူတစ်ဝက်လောက်က ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ကိစ္စမျိုးကို ဆွေးနွေးလို့ မရတဲ့အခါမှာ ရှက်နေရတာ၊ မကောင်းတဲ့ ခံစားမှုမျိုး ဖြစ်တာနဲ့၊ မှားယွင်းတဲ့ အချက်အလက်တွေရတာမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မမှာလည်း ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိတာမို့ ကျွန်မရဲ့ သမီးလေးကိုတော့ ဒီလိုမျိုးတွေ မခံစားရစေချင်ပါဘူး။ အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ် အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မတို့အားလုံးဟာ ကူညီဖေးမပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်၊ ဒီလိုကူညီဖေးမပေးဖို့အတွက်လည်း ကျွန်မတို့က ဒီကိစ္စကို စပြီးဆွေးနွေးပြောဆိုသွားကြဖို့လိုပါတယ်” ဟု ကမ်ပိန်းတွင် ပါဝင်ကူညီပံ့ပိုးပေးထားသည့် လူအများကစံထားရသူ Social Influencer တစ်ဦး ဖြစ်သော မသန္တာလှိုင်က ဆိုပါတယ်။
“ဓမ္မတာသွေးပေါ်တယ်ဆိုတာ ဂုဏ်ယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အမျိုးသမီးဖြစ်တည်မှုနဲ့ ဘဝတွေရဲ့ ပြယုဂ်ဖြစ်တာ ကြောင့် ရှက်စရာမလိုပါဘူး။ ကျွန်မတို့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ချစ်ဖို့ လိုအပ်တာကြောင့် ကျွန်မတို့အနေနဲ့ ပထမဆုံး ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေကို နားလည်ဖို့လိုပြီး ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ဖို့ သင်ယူရပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့ So What!? ကမ်ပိန်းမှာ ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်း ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ အမျိုးသမီးဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူနေရမယ့် အချိန်ရောက်ပါပြီ။ မဟုတ်ဘူးလား” ဟု ကမ်ပိန်းတွင်ပါဝင်သူ သရုပ်ဆောင်နှင့် Solo Burma Travel Programme ထုတ်လုပ်သူ မအေးမြတ်သူက ဆိုခဲ့ပါတယ်။
So What!? ဟာဆိုရင် ပန်းကလေး၏ ပထမဆုံးသော အသိပညာပေးမျှဝေရေး ကမ်ပိန်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤကဲ့သို့ လူထုအားလုံးပါဝင်နိုင်မည့် အစီအစဉ်ကို ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ပြည်သူလူထုအား ဓမ္မတာရာသီသွေးပေါ်မှုအကြောင်းကို နားလည်လာစေကာ၊ ဤသည်မှာ သဘာဝပင်ဖြစ်ကြောင်းကို အသိပညာပေးသွားနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဤသည်မှာ လူသိရှင်ကြားဆွေးနွေးအပ်သောအရာမဟုတ်ဟူသော ယူဆချက်များကို တွန်းလှန်သွားမည်ဖြစ်သည်။ So What!? ဟူသော စကားစုသည် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ယုံကြည်မှုရှိခြင်း၊ ဓမ္မတာရာသီသွေး၏ သဘာဝဖြစ်စဉ်အဖြစ် တည်ရှိခြင်းတို့ကို ဖော်ညွှန်းနေကာ ဤသည်တို့ကို အမျိုးသားများရော၊ အမျိုးသမီးများပါ နားလည်လက်ခံရန် အကြံပြု တိုက်တွန်းလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်။ So What!? ဗီဒီယိုများကို ကမ်ပိန်း၏ Facebook စာမျက်နှာဖြစ်သော https://www.facebook.com/sowhatmm/ တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ကာ ဗီဒီယိုများကို အပိုင်းလိုက်ခွဲ၍ တင်ဆက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ရပါတယ်။
MyStyle Myanmar2019-03-06T15:45:02+06:30March 6th, 2019|News|